China Micro Ropa Kuunganidza Tube Kugadzira Line vagadziri uye vanotengesa | IVEN
1. High degree of automation - yakazara otomatiki gungano mashandiro, zvine mutsindo optimization uye kusangana kweanoshanda mashandiro, otomatiki capping kune apedza chigadzirwa kuburitsa. Iyo tambo yekugadzira yega inongoda 1-2 vane hunyanzvi varairidzi kusangana nezvinodiwa zvekugadzira;
2. Kudhura kwemutengo kuita, kufamba uye roora rehuwandu hwemidziyo - modular dhizaini, dhizaini dhizaini, uye inogona kuunganidzwa otomatiki zvinoenderana chaiko kugadzirwa kwezvinodiwa zvevatengi.
3. Dhigirii repamusoro revanhu-muchina nhaurirano - humanized chiteshi dhizaini, humanical man-muchina interface chirongwa dhizaini, kuratidza yakawanda-basa alarm uye yekubatsira kugadzirisa.
4. Maitiro ekugadzirisa, kutonga kwehunhu - kushomeka kwezvinhu, kushomeka kwekutsvaga kwekuita, kuomesa kudziya kwekushisa, chivharo munzvimbo yekucherechedza, kushaya chivharo chekuona uye kumwe kuonekwa, nezvimwe.Nzira imwe neimwe inoedzwa uye inodzorwa, yakakwira yakaenzana chiyero;
5. Iyo dosing system inonyatsoita dosing, uye dosing izvo zvinoenderana zvigadzirwa nenzira yakanangwa. Chiteshi cheatomizing uye dosing chakashongedzerwa neiyo ultrasonic otomatiki yekuchenesa kamwene basa.
6. Ultrasonic otomatiki yekuchenesa kamwene, uye yakagadzirirwa neyakaomesa basa, unogona kumisikidza yekuchenesa frequency maererano nemaitiro anodikanwa, hapana chikonzero chekuchenesa iyo bhuti nemaoko. (Atomizing uye dosing chiteshi)
7. SUS304 zvinhu jira simbi, furemu uye musuiti jira rinotora nano kugadzirisa, simbi chimiro furemu, kukwirira kuomarara uye kuvhunduka kupinza kwakasungwa simbi simbi furemu.
Pneumatic AIRTAC humburumbira, solenoid vharuvhu, shangshun humburumbira nezvimwe pneumatic zvinoriumba zvinoshandiswa kuona kugadzikana kushanda uye hupenyu hwakareba.
Magetsi zvigadzirwa Original Schneider (France) midziyo yemagetsi, Omron (Japan) uye Leuze (Germany) yekuyedza yekutanga, Mitsubishi (Japan) PLC, Siemens (Germany) murume-muchina interface, Panasonic (Japan) servo mota.
Dosing mudziyo American FMI zvedongo metering pombi, yekumba chaiyo ceramic jekiseni pombi. (chirongwa ichi chine chete dosing chiteshi).
Main zvinoriumba Izvo zvinhu zvakagadzirwa nesimbi isina simbi jira simbi, furemu uye musuwo zvakagadziriswa, simbi simbi furemu, yepamusoro aruminiyamu chiwanikwa, yakatsiga uye yakavimbika uye nyore kuchenesa, zvinoenderana nezvinodiwa neGMP.
Zvinoshanda chubhu Specification Flat pasi micro chubhu. (zvichibva pamasampuli akapihwa, seti ina)
Kugadzira kugona ≥ 5500 zvidimbu / awa
Dosing nzira uye kunyatso 2 minyatso FMI zvedongo huwandu hwepombi (mweya atomization) ≤ ± 6% (yekuverenga base 10LL)
Kuomesa nzira 1 boka, "PTC" kupisa, kupisa mweya unopisa
Simba Mutsara wegungano ~ 6 KW
Yakachena yakadzvanywa mweya kumanikidza 0.6-0.8Mpa
Kushandiswa kwemweya <300L / Maminitsi, mhepo Inlet G1 / 2, mhepo mutopota Ø12
Chiyero chemidziyo: kureba, upamhi uye kukwirira 3000 (+ 1000) * 1200 (+ 1000) * 2000 (+ 300 alarm light) mm
Pashure: IV Catheter Assembly Mushini
Zvadaro: Cartridge yekuzadza yekugadzira Line
Mwana Ropa Kuunganidzwa Tube Machine
Micro ropa rekuunganidza chubhu yegungano mutsara
Micro Ropa Kuunganidza Tube Machine
Mini Ropa Kuunganidza Tube Muchina
Yevana Ropa Kuunganidzwa Tube Gungano Line
Chiremba Ropa Kuunganidza Tube Kugadzira Line
Screw Cap Mini Ropa Kuunganidzwa Tube Assembly Line
Screw Cap Yevana Ropa Kuunganidzwa Tube Kugadzira Line
Yakagadzirirwa-Syringe Machine, Pre Yakazadza Syringe Kuzadza Machine, Ampoule Machine À Coudre Singer, Disposable Syringe & Tsono Production Line, Ampoule Machine À Coudre Bernina, Ampoule Muchina À Coudre Led,